[Zhongshan Jiwu] Imyuziyam yaseNanjing yaseSun Yat-sen Mausoleum/Xia Mafang Subway Station/Ubomi obutofotofo kunye nobugcisa/iyadi yaseJapan
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguEra
[IZhongshan Jiwu] Emelene neNdawo yaseZhongshan Mausoleum Scenic, eyona ndawo intle ikuvumela ukuba uye kweyona ndawo idumileyo yaseNanjing, kwaye uhlale emva kweengcango ezivaliweyo kwigalari yakho yeB&B +.
Indlu enamagumbi amabini okulala, ebekwe kumgangatho wokuqala wendlu, enentendelezo encinci ezimeleyo yesitayela saseJapan, olu khetho olukhulu lokuzola.
Njengomyili kunye nomyeni wam njengegcisa, ndinethemba lokwabelana ngamava ethu obomi bobuhle nabantu abaninzi.
Ndiyathemba ukuqala ubomi bakho obucothayo bobugcisa beNanjing kwindawo ekhethekileyo yegolide yendawo ebukekayo, eyona ndawo inomdla kwaye ivulekile kwaye ikhululekile.
【Zhongshan kunye neNdlu】
Idibanisa indawo yokuhlala kunye negalari, kwaye inethemba lokukunika ukonwabela ukuhlala kwigalari.
Uthotho lwe "Jiwu J SPACE" yindawo engaxhunyiwe kwi-intanethi eyenziwe yi-Geer Arts, eyindawo yamava obugcisa angoku edibanisa izindlu zeendwendwe kunye neegalari. Ijongwe yinkosi yeCentral Academy yezoBugcisa obuLungileyo.
Saqala ukungcamla ubugcisa, saza saqalisa ukuva imfuneko yobugcisa ebomini.Kwigalari entle, ukubukela umboniso opheleleyo, abantu abaninzi badla ngokulibala ixesha, ukuze bazive bezisola xa besiva usasazo oluvaliweyo. Ukuba akukho mda wexesha lokubukela umboniso kwigalari, kuya kuba kuhle ukuba ungalala apha kwaye ulale kunye nemisebenzi yobugcisa.
Zhongshan Jiwu, ibekwe i Zhongshan Umakhi, ilizwe ezigcine of Fengshui e Nanjing, ulwela ukwenza ingqiqo entsha ebomini ezifana "LIVE zaseLimpopo Igalari," yaye inika abathandi ezobugcisa kunye yokuhlala kakhulu ekhululekile yaye intle kuhambo lwabo ulwandiso Offline.; "uJ ISITHUBA" ijonge ukudala homestays Boutique kunye nombono yokuluka i egxininisa ukuba nentsusa kwento kunye yeqondo eliphezulu, uqhekeza imida ezendeleyo phakathi art kunye nobomi, yaye eqonda intsebenziswano multi-intetho kuzo amasimi sizimisele. ukuba ukwabelana nokuncoma amagcisa Young kakhulu kunye neeprojekthi zobugcisa zinethemba lokudala amathuba oqhagamshelwano olusondeleyo kunye nemisebenzi yobugcisa kunye namagcisa kwiindawo zokuhlala zendabuko, kunye nokudala amava amatsha okuhlala kwigalari.
Indawo isanda kulungiswa kwaye iyilwe ligcisa lam kunye nam.Ihombisi yendlu yeyomgangatho wokuziphilisa, nokuba zithini na iindleko.
Inentendelezo ezimeleyo yohlobo lwaseJapan apho unokugcakamela ilanga, usele ikofu, kwaye wonwabele ixesha lokuphumla lokuhamba.
Ixhotyiswe ngeshampu enegama, ukuhlamba umzimba, isicoci sobuso esingeniswa kumazwe angaphandle, isicoci se-makeup, iipedi zomqhaphu, ifloss yamazinyo, i-cotton swabs, njl., kunye neseti epheleleyo yezinto eziyimfuneko zemihla ngemihla.
Ikufuphi neZhongshan Tomb Scenic Area, indawo enomtsalane kubakhenkethi eNanjing, kwaye iikhilomitha ezi-2 kuphela kude neMyuziyam yaseNanjing. Ngexesha leeholide, ummandla we-Zhongshan Tomb Scenic Area uxinene kakhulu kwaye ukuthutha kunzima kakhulu.Ungonwabela ukuhamba okanye ukuhamba ngebhayisikile ngokukhawuleza xa uhlala endlwini.
Ngenxa yokuba kufutshane nesikhululo sikaloliwe, kukulungele kakhulu ukuya kwiNdlu kaMongameli kunye neTempile yeConfucius. Indlela engaphantsi komhlaba inokufikelelwa kwimizuzu eyi-15.
Uluntu yindlu yabasebenzi beshishini eliphakathi, ecaleni kwesikhululo samapolisa, ikhuselekile kakhulu.
Ubomi ebumelwaneni buluncedo kakhulu.Kukho iindawo zokutyela kwasekuseni kunye neendawo zokutyela xa uphuma, kwaye unokuhamba uye kwisitrato sorhwebo ngemizuzu emi-5. Kukho izinto ezininzi zokukhetha ukutya okutyiwayo kunye nedinala.
Umbuki zindwendwe ngu- Era
设计师 我是南京土著 喜欢旅游 美食 希望能分享南京的美
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Nanjing